ब्लग/विचार – Page5– दाङ खबर
Jul172018 by DangkhabarNo Comments
हामी फष्ट होइन प्रष्ट हुन चाहन्छौं ! (प्रकाशकीय)
दाङ खबर डट. कम. आजदेखि चाैथाे वर्षमा प्रवेश गरेको छ । दाङको घोराहीबाट ठीक ३ वर्ष अघि आजैका दिनदेखि प्रकाशन सुरु गरेको दाङ खबरले आफ्नो पहिलो मिसन पुरा गरेको छ । मोफसलमा अनलाइन पत्रकारिताको सम्भावनाको खोजी गर्ने मुख्य मिसनका साथ सुरु भएको दाङ खबरको प्रकाशन पश्चात् यसका सहयात्री भएर दर्जनौं अनलाइन पत्रिकाहरु प्रकाशनमा आएका छन् । राजधानीकै तुलनामा स्तरियता प्रदान गर्न सफल भएका छन् । यस अर्थमा हामी हाम्रो पहिलो मिसन पुरा भएको निश्कर्षमा पुगेका छौं । ‘तपाईको अनलाइन पत्रिका कुन प्रेसमा छापिन्छ’ हामीले अनलाइनको प्रकाशन थाल्दै गर्दा यस्ता प्रश्न र जिज्ञासा आउने गरेको कटु यथार्थता हामी माझ छ । राजधानीका अनलाइन पत्रिका पढ्दै गरेका दङालीहरुलाई अनलाइन पढाउन हामीलाई ठूलै संघर्ष गर्नुपर्यो । हुन त दाङका लागि हाम्रो प्रकाशन पहिलो भने थिएन । हामी भन्दा धेरै पहिलेदेखि दाङमा अनलाइन पत्रकारिताको सुरु भएको
Jul122018 by DangkhabarNo Comments
गोविन्द केसी बिदेशी मेडिकल माफियाका दलाल हुन्
मेटमणि चौधरी, डा. गोविन्द केसीको विषयमा जनताहरूमा थुप्रै भ्रमहरू रहेका छन् । यसबारेमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ । उनले उठाएको मागमा १० वर्षसम्म काठमाडौँमा कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन र एउटा मेडिकल कलेजले ५ वटा भन्दा बढी कलेजलाई (affliction) दिनु हुँदैन भनिएको छ । मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन भन्नुको अर्थ मेडिकल क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउनु हो । आज अर्वाै पैसा एम.वि.वि. एस. को नाममा भारत, बँगलादेश, चीनलगायत बिदेशी भूमिमा गइरहेको छ । त्यो अझै गैररहोस् भन्नु हो । यति मात्रै नभएर नेपाली विद्यार्थीहरू नेपालका मेडिकल कलेजमा पैसा तिरेर पनि पढ्न पाएका छैनन् । कतै डा. गोविन्द केसी बिदेशी मेडिकल कलेज र नेपाली मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूका दलाल त होइन्न ? शंका लागिरहेको छ । जहाँसम्म (affliction) को कुरा छ–एउटा मेडिकल कलेजले किन ५ वटालाई मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने ? जहाँ–जहाँ जुन–जुन ठाउँलाई आवश्यकता छ
Jul32018 by DangkhabarNo Comments
बिहे शारीरिक सम्बन्ध गर्ने लाइसेन्स हो त ?
गोविन्द खड्का-एक जना महिला मलाई बलात्कार भयो भनेर उजुरी गर्न आउनुभयो । उहा“को निवेदन दर्ता गरायौ“ । केटा केटि दुवैको बयान लियौ । त्यसक्रममा उनिहरुले लामै समय सम्म शारीरिक सम्वन्ध भएको स्विकारँे । अन्तिम दिन घरका मान्छेले भेटाएछन् । सानो कोठा बाट सिधै माथिल्लो तला महिला सुत्ने कोठमा पुरुष पस्ने रहेछन् । दुवैको सहमतिमा शारीरिक सम्वन्ध गर्दारहेछन् । राति उतै बाट निश्केर जान्थे । कसैले थाह नपाउदा सम्म लुकाईयो । जतिबेला घरका मान्छेले देखे बलात्कार भनियो । उनिहरुको बयान लिन आधारशिला बहिनीहरुलाई जिम्मा दियौ“ । केटाले मात्रै गल्ती गरेको भन्न उहाहरुले पनि सक्नु भईन । केटिको कमजोरी भन्ने ठाउ“पनि थिएन । त्यसपछि म आफैले दुईजना संग बयान लिए“ । पाटन सहित साथिहरु बसेर बलात्कार भन्न नसकिने ठहर गरियो । कोठमा कसरी आउथे । कपडा कसले खोल्थ्यो । मुख थुन्ने, कतै भनिस भने यस्तो गछौ भनेर धम्कि दिन्थ्यो कि
May232018 by दाङ खबरNo Comments
सतिसाल झैं उभिएका यी २ क्रान्तिकारी आर्दश
अजयदीप शर्मा कम्युनिष्ट कितावका पाना पल्टाउनेले नेत्रलाल अभागी र कृष्ण सेन, इच्छुकको नाम कहि न कहि भेट्टाउने गर्छ । राजनीतिमा होस वा पत्रकारितामा, शैक्षिक क्षेत्रमा होस वा साहित्य सिर्जनामा जो कोही कम्युनिष्ट सदस्य कृष्ण सेन र नेत्रलालको निष्ठा र आर्दशबाट प्रभावित नरहि सक्दैन् । सेन र अभागी सेन र अभागी फरक उमेर र फरक पारिवारिक संस्कारका व्यतिmहरु हुन् । र उनीहरु वेग्ला, वेग्लैं कम्युनिष्ट धार र संगठनमा जोडिएका एउटै क्रान्तिकारी हुन् । दंगाली भूमिमा यी २ सपुतले मूल्यको राजनीतिमा आफनो जीवनको पसिना मात्र खर्चेका छैनन,आफनो आस्थामा रतिmभर नझुकि बरु आफूलाई मृत्युको सुलिमा चढाएकाछन् । निरकुंश सामन्ती अत्याचारको अन्त्य गरेर जतताको उज्यालो स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राज्यको स्थापना गर्ने सपना दुबैले वाल्यकाल देखि देखे र त्यो लक्ष्यका लागि कठिन भन्दा कठिन अप्ठ्यारा र दुःखलाई झेल्न तयार भए र क्रान्त
May202018 by DangkhabarNo Comments
साहित्य, राजनीति र शिक्षाका धरोहर सहिद नेत्रलाल अभागी
महेन्द्र महक- इतिहास पढ्ने धेरै हुन्छन्, तर इतिहास निर्माण गर्नेहरु थोरै हुन्छन् । आपूm बाँचिरहेको समाज धेरै कुरा धेरैलाई मन नपरेका हुन सक्छन्, तर ती मन नपरेका कुरालाई बदल्ने सासह थोरैले गर्छन् । यसरी जसले मन नपरेको समाजलाई बदल्ने अठोट लिएका हुन्छन्, उनीहरु नै इतिहासमा अमर बन्न पुग्छन् । यस्तै समाज बदल्ने बाटोमा आजीवन हिड्दाहिड्दै मृत्युवरण गर्न पुगेका महान योद्धा हुन्– नेत्रलाल पौडेल अभागी । नेत्रलालको जन्म वि.स. २००१ साल पुस २७ गते बुधबार एकादशी तिथिका दिन दाङको धर्ना गाविस वडा नं. २, सिसैपुर गाउँमा भएको हो । उनको न्वारनको नामनै नेत्रलाल अभागी हो भने उनी ब्राह्मण जाति, पौडेल थरमध्ये काला पौडेल, आत्रेय गोत्र वंशजका सदस्य हुन् । नेत्रलाल पिता मोहनलाल उपाध्याय र माता जयन्ती उपाध्यायका दशौं सन्तानमध्येमा सबैभन्दा कान्छा सन्तान हुन् । बाल्यवास्थामा उनी अन्य बालकजस्तो चकचके थिएनन् बरु उन
सूचना प्रविधि शिक्षामा बढ्दो आकर्षण
अजय शर्मा-मानव अधिकारका रूपमा लिइने आधारभूत शिक्षामा सबैको सरल पहुँच बनाउन र दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा खुला शिक्षाको सहजताका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग उपयुक्त माध्यम हो । परिवर्तित सन्दर्भमा युगको माग अनुरूप शिक्षा क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएसम्म मुलुकको आधुनिक शिक्षाको परिकल्पना अपूर्ण हुने निश्चित प्रायः छ । सन् १९४८ को मानव अधिकारको घोषणापत्रले आधारभूत शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो भनेको छ । त्यहीं अधिकारमुखी आवधारणाका कारण सबैका लागि शिक्षा अघि आएको हो तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा विद्यमान शैक्षिक संरचनाले मात्रै सबैलाई औपचारिक शिक्षा दिन सम्भव देखिंदैन । त्यसैले दूर शिक्षा, अनलाइन तथा खुला शिक्षाका माध्यमबाट पनि शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा पनि दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा तथा खुला शिक्षा
कम्युनिष्ट, धर्म र मदन भण्डारी
-मीनबहादुर पण्डित- नेपाली जनता धर्म कर्म मान्न नपरोस भनेर कम्युनिष्ट बनेका होइनन । कांग्रेस र अरु पार्टीले भन्दा कम्युनिष्टहरूले देश विकास राम्रो गर्छन कि भनेर मात्र कम्युनिष्ट बनेका हुन । अनि कम्युनिष्टहरूलाई भोट हालेका हुन । त्यसैले नेपाली जनतालाई मार्क्सवाद लेनिनवाद, वा मावोवबाद बुझेका नेता चाहिएको होइन, नेपाली जनतालाई त देश विकास गर्ने तरिका बुझेको नेता चाहिएको छ । संसारको सृष्टि कहिले र कुन अदृष्य शक्तिले गर्‍यो त्यो आज सम्म कुनै पनि वैज्ञानिकहरुले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । किनकी, संसारका कुनै पनि वैज्ञानिकले एक चिम्टी माटो बनाउन सकदैनन, फेरि कहाँबाट आयो यत्रो ढुङ्गा, माटो, पानी अनि हावा ? (कुनै पनि बैज्ञानिकहरुले नयाँ पदार्थको र्सिजना गर्न सक्दैनन् । बैज्ञानिकहरुले त केवल पृथ्वीमा भएको पदार्थ प्रयोग गरेर स्वरुप, आकार र विशेषता बदलिएको नयाँ पदार्थ र्सिजना गर्न मात्र सक्छन् ) कुरा य
विष्णु रिजाल-गत माघ ८ गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट अवैध रूपमा भित्रिएको ३३ किलो सुनले अहिले हाम्रो पूरै राज्यसंयन्त्रलाई हल्लाइदिएको छ । सोझो स्वभाव र लागेका कुरा सिधै भन्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्रिभुवन विमानस्थलबाट टनका टन अवैध सुन भित्रिन्छ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मुलुकको अवस्था कति भयावह रहेछ भन्ने बुझ्नका लागि धेरै दिमाग नै खियाउनु परेन । तस्करहरूले सजिलो बाटोका रूपमा नेपाललाई, त्यो पनि एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्रयोग गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । विगतमा पनि गृहमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, विमानस्थलका अधिकारीहरूको संलग्नतामा सुन तस्करी भएका घटनाहरू प्रशस्त छन् । त्यतिबेला र अहिलेमा एउटा कुरा फरक छ त्यतिबेला सामान्य चर्चा भयो, एकाध तल्ला तहका प्रहरी कारबाहीमा परे र घटना सामसुम गरियो । यसपटक चाहिँ गृहमन्त्रालय नै छानबिन समिति गठन गरेर आशंका गरिएका एक एक व्यक्तिको बय
दलित आन्दोलनको बाटो र पाटो
त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले- नेपाली दलित आन्दोलन सम्मान, सत्ता र शक्तिका दृष्टिले पूर्ण हुँदैछ । त्यसो त आन्दोलनले विभिन्न आयाम र आवश्यकता खोतल्नु पर्ने भएकाले कुनै पनि आन्दोलनको समाप्ती हुँदैन । न त आन्दोलनमा पूर्णबिराम नै लाग्न सक्छ । समय र सन्दर्भअनुसार यसको स्वरूप, नारा र सार बदलिन्छ तर अब नेपाली दलित आन्दोलनलाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन बरू सम्मान गर्न तयार हुुँदैछन् हिजो उपेक्षा गर्नेहरू । सत्तालाई पदीय कुर्सीमा मात्र नबुझ्ने हो भने सत्ताप्राप्ति र सत्ता निर्धारण गर्नसक्ने सामथ्र्य नेपाली दलित आन्दोलनले प्राप्त गरेको छ । यसैगरी दलित आन्दोलन अब एउटा समुदाय वा वर्गको मात्र होइन । कसैले कसैमाथि दीनदृष्टि राखिदिनु पर्ने विषय मात्र होइन अहिलेको दलित आन्दोलन । दलित आन्दोलन राष्ट्रिय शक्ति बनिसकेको छ । यस्तो शक्तिलाई उपेक्षा गरेर न अबको नेपाली राजनीति चल्छ न समाज । यति सुनौलो उपलब्धि प्राप्त ग
हल्लाको शेयर बजारमा लगानीको सुझबुझ
सरोज अधिकारी-शेयर बजारमा नाफा बुकिङ गर्नेको लहर सकिएपश्चात् बजार पुनः सामान्य गतिमा चल्दै रहेको अवस्था छ । एक हजार १६८ को न्यून बिन्दुलाई छोएर तथा दैनिक २० करोड रुपियाँको हाराहारीमा मात्र कारोबार हुने अवस्थाले आत्तिएका लगानीकर्ताले त्यतिबेला सस्तैमा शेयर बिक्री गरेकामा अहिले पछुताएको अवस्था छ । यस्तै त्यतिबेला सस्तोमा शेयर खरिद गरेर छोटो समयमा नाफा बुकिङ गर्दै केही कारोबारी बाहिरिएको कारण नै बजार सामान्य गतिमा अघि बढ्दो छ । बजार घट्दाको बेला तरलता अभाव भएको, लगानीयोग्य रकम कम भएको, शेयरको आपूर्ति बढेको, चर्को ब्याजदर, बजार सुधारका लागि कुनै कदम नचालेको जस्तो विविध कुरा बजार घट्नुका कारणको रूपमा आउने गरेको थियो तर नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै बजारमा एकाएक बढोत्तरी आयो एकै दिन ५० अङ्कभन्दा माथिको बढोत्तरी र दैनिक एक अर्ब ५० करोडभन्दा माथिसम्मको कारोबार बजारले यसै महिनामा देख्यो । बजार बढेका बेल